Yingzụta Omume Agbanwewo, Companlọ Ọrụ Enwebeghị | Martech Zone
Zụta Omume Agbanwe Agbanwe, Companlọ Ọrụ Enwebeghị
Saturday, January 23, 2010 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Mgbe ụfọdụ anyị na-eme ihe nanị n’ihi na ọ bụ otu ahụ ka esi mee ya. Ọ dịghị onye na-echeta ihe kpatara ya, mana anyị na-eme ya… ọbụlagodi na ọ na-ewute anyị. Mgbe m lere ụdị ọrụ azụmaahịa na azụmaahịa nke ụlọ ọrụ nke oge a anya, usoro a agbanwebeghị kemgbe anyị nwere ndị ahịa pushing pavụ na ịpị maka dollar.
N'ọtụtụ ụlọ ọrụ m gara, ọtụtụ "ahịa" na-eme n'akụkụ ahịa nke mgbidi. Ahịa na-ewere iwu. N'ụzọ dị mwute, n'ihi iwu nke nzukọ ahụ, Ngalaba Ahịa na-aga n'ihu na-akwụ ụgwọ na mbọ ndị ahụ. Ọ bụ mpaghara isi awọ a nke na-eme ka ị nweta mmetụta mmekọrịta mmadụ na ibe ya sie ike.
Edere m banyere otu Ahịa nwere ike isi jiri uru mgbasa ozi mmekọrịta yana mgbanwe nke omume ndị na-azụ ahịa na obere posts:
Mgbanwe Ahịa Na-agbanwe
Ise Social ịkparịta ụka n'ingntanet Nzọụkwụ maka Ahịa ọkachamara
Companiesfọdụ ụlọ ọrụ ndị m maara kpaliri Marketing kpamkpam n'ime Ahịa ma ndị ọzọ ewepụla ndị otu ahịa kpam kpam. Adịghị m na-akwado ma, ma ọ bụ na-akpali na e nwere ọtụtụ ọgba aghara na-eme mgbe ọ na-abịa ebe itinye ego gị ahịa na ahịa mmefu ego. Enweghi usoro nke n’eme ka ndi obodo turu ahia… ebe erere ahia gi n’enweghi enyemaka nke ahia ma obu ahia kama obodo gi.
Usoro ọdịnala n'ime nzukọ na-enyefe otuto dị ka atụmanya na-aga n'ihu n'ahịa ahịa.
Eziokwu, n'ezie bụ na ire ere nwere ike ịbịa site na Ahịa, Azụ ahịa ma ọ bụ ọbụlagodi site na Obodo gị. Ugboro ole ka ị zụrụ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ dabere na nkwanye sitere na obodo gị?
Ọ bụ ihe ijuanya nye m na ụlọ ọrụ ndị ọzọ anaghị erite uru nke obodo ahụ na-eji ọrụ mgbakwunye mgbakwunye. M nwere Mgbakwunye ahịa na akaụntụ na bụla ngwaahịa na Ntuziaka nkwekọrịta na niile nke m mgbere. Ana m enweta ahịa maka òtù ndị ahụ, ya mere, ọ bụ ihe ziri ezi na m ga-enweta otuto yana ụgwọ ọrụ!
Dị ka o kwesịrị, 'nso' agaghị eme na Ahịa, Ahịa ma ọ bụ na Community. Ọgwụgwụ ahụ ga - eme na usoro nke usoro akaụntụ ahụ, na-ekwusi ike na irere ahịa nke ọma na isi mmalite. Nke a ga - enye ụlọ ọrụ ohere ịchọpụta ebe ha kwesiri itinye ego ha.
Ahịa, Ire ahịa, na Ngwaahịa kwesịrị ịsọrịta mpi megide ibe ha maka ngwa na nsonaazụ. Ha ga-arụkọ ọrụ ọnụ nke ọma iji hụ na izi ozi na itinye akara na-agbanwe agbanwe. A ga-atụle ego ọ bụla gafee akụrụngwa atọ a. Transfọdụ na-enyefe nke n'aka nwere ike ime, n'ezie… a Ntuziaka nwere ike ịga na ebe nrụọrụ weebụ ma kpọtụrụ ahịa maka ozi ndị ọzọ. N'ọnọdụ ahụ, ndị ahịa na-azụlite ma na-eweta ire ahụ ka ha mechie.
Nwere ike ịchọpụta na ị nwere ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ pụtara ìhè nke na-eto site n'okwu ọnụ naanị ya… na nke a, ị ga-akacha mma itinye ego na ngwaahịa ahụ karịa ahịa na ahịa. N'ezie, ọ bụrụ na enweghị mmechi eme na obodo, ndị ọrụ ngwaahịa ga - aza ajụjụ maka ya - enwere ezigbo ohere ngwaahịa gị enweghị.
Usoro ochie ị na-apụ apụ anaghị arụ ọrụ ọzọ. Ọtụtụ ngalaba azụmaahịa nwere ọnụego dị egwu, mana ebe ọ bụ na ahịa na - enweta otuto - ha na - enwetakwa akụ. Ahụla m ọtụtụ ngalaba ngalaba ahịa na-ewepu ọrụ ebube na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmefu ego… na-agbanye na nzukọ ebe ndị otu ahịa na-ewere iwu - mana ka ha na-enweta otuto, akụrụngwa na ego. Ọ bụrụ na ntanetị weebụ nwere ike isi na saịtị ahụ gaa na njedebe na otu akaụntụ ahụ, ngalaba ahịa nwere ike ịnweta kredit.
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ chọrọ ịghọta mkpa ọ bụla aghụghọ ọ bụla dị na atụmatụ azụmaahịa ha niile, ọ dịkwa mkpa ka ha nwee ike ịlele ebe ahịa si abịa!
Tags: arụmọrụ ọdịnayaformsfrenchGermanụlọ ọrụ roiMari Smithnyochana-ere n'ỊntanetỌhụrụ Mmekọrịta Ahịa
Easyzọ atọ dị mfe iji malite nyochaa akara gị n'ịntanetị
ChaCha dị mma karịa Google?